Zimbabwe weather in March 2022: How hot & sunny?
Zimbabwe weather in March 2022
The March weather guide for Zimbabwe (Harare) shows long term weather averages processed from data supplied by CRU (University of East Anglia), the Met Office & the Netherlands Meteorological Institute. Find out more about our data sources.
How hot is it in Zimbabwe in March?
Daytime temperatures usually reach 26°C in Harare, Zimbabwe in March with low heat and humidity, falling to 14°C at night.
How sunny is it in Zimbabwe in March?
There are normally 7 hours of bright sunshine each day in Harare, Zimbabwe in March - that's 61% of daylight hours.
Does it rain in Zimbabwe in March?
There are usually 11 days with some rain in Harare, Zimbabwe in March and the average monthly rainfall is 116mm.
Zimbabwe March sunrise & sunset times
Browse the sunrise and sunset times for Zimbabwe in March 2022. Select a month to view Zimbabwe sunrise and sunset times for the next 12 months. The Zimbabwe sunrise and sunset times shown below are for Harare.
Tuesday, 1st March 2022 05:55 18:21
Wednesday, 16th March 2022 05:59 18:10
Thursday, 31st March 2022 06:02 17:58
Language(s) English, Shona, Ndebele